जिबनशैली साहित्य – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : बुवा ठुलो स्वरले कराउँछन् । राजु दौडँदै आउँछ, र सोध्छ, “हजुर बुवा…, के होला?” बुवा- “तँलाई थाहा छैन, आज तेरो दिदी रश्मी आउँदै छ भनेर ? हिजो बाट तीन चार पटक भनी सकेँ ! यो चोटि उसले हामीहरू सँगै मिलेर आफ्नो जन्मदिन मनाउने छ….। अब छिटो जा र आफ्नो दिदीलाई ल्याएर आइज……! अनि, सुन त…. तँ तेरो नयाँ कार लगेर जा जो तैँले गत साता किनेको थिइस्….रश्मिलाई राम्रो लाग्ला ।” यो पढ्न छुटाउनु भयो कि . कहिल्यै त लामो बस्दाउनी हो.. देऊ-बा ! . म भन्दा ठुलो लोभी . अब म आउँदिन राजु – “तर मेरो कार त आज बिहानै मेरो साथीले लगेर गइसक्यो….., र तपाईँको कार पनि ड्राइभरले ब्रेक जाँच गर्नु पर्नेछ भन्दै लगेर गा छ ।” बुवा – “ठिक छ…. तँ एयरपोर्ट त जा छिटो….अरू कसै साथीको कार लगेर गए पनि भो । कसैको न पाइए भाडामा नै लगेर जा ….तर जा छिटो, रश्मि खुशी होली ।” राजु – “अहो बुवा, तपाईँ पन
मेरी आमाले रुँदै भन्नुभयाे, `मैले बुहारीको औँठी चो-रेको छैन छोरा…´; ( २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला )
Sapana Sanjal : मेरी आमाले रुँदै भन्नुभयाे, `मैले बुहारीको औँठी चो-रेको छैन छोरा…´; ( २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला ) । एकदिन बेलुकापख मेरो श्रीमतिले औंठी चो-रेको आ-रोप पटक -पटक मेराे आमालाई लगाउँदै थिईन र म उनलाई चुपलाग भनेर सम्झाईरहेको थिंए तर मेरो श्रीमती चुप रहनै मानिनन र उनले झन च-र्को स्वरमा स-रा-प्न थालिन । मेरो बाबाले दिनुभएको त्यो औंठी, यहीनेर राखेकी थिंए ,तपाई र म भन्दा अरु कोही यो कोठामा आएको पनि त छैन । यो औंठी तपाईंको आमाले नै चो-रे-को हुनुपर्छ । जब म यो कुराले सहन सकिन तब मैले उनलाई एक झा-प-ड ल-गाइ-दिए । अहिले भर्खर तिन महिना त भयो नि तिमीसंग बिबाह गरेको , तिमिले के चिनेकी छौ मेरो आमालाई ? मेरो हातको झा-प-ड दह्रो थियो र उनले सहन सकिन र घर छाडेर माइत जान लागिन ” जाने क्रममा उनले मतिर हेरेर भनिन्; सन्तोष , तपाइँलाई आमाको यतिधेरै बिश्वास किन लाग्छ ? मैले भने- जब म सानो थिं
Sapana Sanjal : कुनै पनि गल्ती मान्छेले दुइ पटक गर्न सक्दैन र यदि गर्छ भने त्यो उसको गल्ती होइन उसको इच्छा हो भनेर बुझ्नु – प्रेरक भनाईहरु । पूरा पढ्नुहाेस् र राम्राे लागेमा सेयर गरि दिनुहाेला । १) जीवनमा त्यो मान्छेलाई माया गर्नु जसले तिम्रो यी तिन कुराहरुलाई बुझ्ने गर्छ । एक तिम्रो मुस्कान भित्र लुकेको पीडालाई, दुइ तिम्रो रिस भित्र लुकेको मायालाई र तिन तिम्रो विवशता भित्र लुकेको कारणलाई । २) हरेक मान्छे बिक्छ यहाँ, को कतिमा बिक्छ यो उसको बाध्यताले तय गर्दछ । ३) मानिसले ति दुइ व्यक्तिसंग कहिल्यै झुट बोल्न सक्दैन, पहिलो जो उसलाई असाध्यै प्रेम गर्छ अनि दोस्रो जसलाई उसले चाडै नै गुमाउदै छ । ४) हातको रेखालाई हेरेर भाग्यमा बिश्वास नगर्नुस किनकि भाग्य त हात नहुनेहरूको पनि हुने गर्दछ । ५) आफ्नो अभिमानलाई कहिल्यै पनि उठ्न नदेउ र आफ्नो स्वाभिमानलाई कहिल्यै पनि गिर्न नदेउ किनकि तिम्रो अभिम
Sapana Sanjal : प्रेम तब मात्र सफल हुन्छ जब आफूले प्रेम गरेकाे मान्छेकाे राम्रो र नराम्रो दुवै पक्षका कुरालाई समान रुपमा प्रेम गर्न सुरु गर्छाै…, १) जो मान्छेले जिन्दगीमा हद भन्दा हद पिडा पाएको हुन्छ त्यो मान्छे कहिल्यै रुदैन, बस चुपचाप बस्ने गर्छ किनकि उसले रुदा रुदा पीडालाई जितिसकेको हुन्छ । २) हरेक बिहान हामी पुन जन्म लिन्छौ, आज जे गर्छौ त्यो महत्वपूर्ण मानिन्छ । ३) आकाशमा त्यस्तो कुनै चिज छैन जसले पूर्व, पश्चिम छुट्याउन सकोस । मानिस आफ्नै बुद्दिद्वारा फरक निर्माण गरि छुट्याउछन् । अनि त्यसैलाई सत्य मानेर बिश्वास गर्छन् । ४) खुशी छु तिमी मेरो जिन्दगी बाट गए देखि, बारबार तिमिलाइ आफ्नो मानेर दुखी हुन अनि रुन परेको छैन । ५) एकचोटि बिर्सीसके पछि सम्झनुको कुनै अर्थ रहदैन किनकी माया नै हो भने उसलाइ जिन्दगीभर कहिल्यै बिर्सन नै सकिदैँन । ६) जब तपाई संग पैसा हुन्छ तब दुनियाले तपाईको औ-का